यी ४ प्रक्रिया पूरा गर्नुहोस , सेक्स गर्दा चरम आनन्द प्राप्त हुन्छ - Baikalpikkhabar
यी ४ प्रक्रिया पूरा गर्नुहोस , सेक्स गर्दा चरम आनन्द प्राप्त हुन्छ
एजेन्सी–सेक्सका वारेमा घरि घरी परिभाषा दिनु राम्रो नहोला । अव हुँदाहुँदै सेक्स यो हो भनेर जानकारी दिने हो भने त झन तनावै होला । यसको मतलव सेक्स भन्ने कुरावाट सवै परिचीत छन । सेक्स लाइ फरक फरक समाजमा फरक तरिकाले लिने गरिएको पाइन्छ , कतिपय समाज सेक्सको बारेमा धेरै खुला र धेरै सँकुचित भएकोप पाइन्छ । मानिस मात्रै होईन जनावर, पशुपक्षिं देखी सवै जसो सेक्स बाट परिचीत नै छन , त्यसकारण पनि सेक्सको बारेमा धेरै सँकुचित हुनुपर्छ भन्ने धारणामा निरन्तर परिवर्तन आइरहेको छ । सेक्स के हो ? किन आवस्यक छ ? सेक्स कसरी गर्ने ? यसको बाट भरपुर आनन्द कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने बारेमा बिश्वमा धेरै खोज र अनुसन्धान हुँदै आइरहेका छन । आउनुहोस अव कुरा गरौं सेक्समा कसरी भरपुर आनन्द लिने भन्ने बारे ।
सेक्समा भरपुर सन्तुष्टिका लागि मस्तिष्क र शरीरकाबीच तालमेल एकदमै आवश्यक छ । यौन सुख चरम अवस्थामा त्यतिबेला पुग्छ, जतिबेला पार्टनरहरुकाबीच शरीर एवं मस्तिष्कमा एक आपसमा एकाकार हुन्छन ।
एकको आनन्द अर्कोलाई आनन्द देओस र एकको सन्तुष्टि दोस्रोको चरम सन्तुष्टि बन्न सकोस । सेक्स विशेषज्ञका सल्लाह छ कि यदि तपाईं यौन सम्पर्कमा चरम सन्तुष्टि (अर्गाज्म) हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने यी चार तरिकाको अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
मान्नुहोस्, सेक्सको असिम आनन्दले तपाईलाई हर्षविभोर बनाउनेछ ।
सेक्समा आनन्द पाउनका लागि तपाईको पार्टनर मानसिक रुपमा तयार हुनु आवश्यक छ । जसका लागि सबैभन्दा पहिलो आफ्नो पार्टनरमा सेक्सको इच्छा जगाउनु जरुरी हुन्छ ।
यौन क्रियाका आनन्द लिनका लागि दुवै पार्टनरका इन्द्रियहरु सेक्स मै केन्द्रीत हुन जरुरी छ । मस्तिष्क सँगसँगै शरीरका हरेक अंग यौन उत्तेजनाअनुसार क्रियाशील हुन सक्नुपर्छ र सेक्सको आनन्द महसुस गर्नुपर्छ । यसले सेक्स क्रियामा गति ल्याउँदछ, उत्तेजना बढ्दै बढ्दैं चरमसुखमा पुग्दछ ।
जब तपाईको पार्टनर सहमति र समर्पण आवश्यक ठान्छ, त्यतिबेला उसका सामु आफूलाई पूर्ण रुपमा समर्पण गर्न सक्नुपर्दछ । यदि दुवै जना यौनक्रियालाई महत्व दिदैंन भने उनीहरुले चरमसुख प्राप्त गर्न सक्दैंनन् ।
यसका लागि यौन क्रियाका बेला विस्तारै फरक फरक आसन रहेर सेक्स क्रिया अगाडि बढाउनुपर्दछ । जब एक ड्राइभर हुन्छ, त्यतिबेला दोस्रो केवल दर्शक भएर उसमा समर्पित हुनु जरुरी हुन्छ ।
यौन क्रियाको समयमा यो जरुरी छ कि आफ्ना इच्छा, आकांक्षा र भावना तथा सुखको खुलेर आफ्नो साथीसँग बाड्नुपर्दछ । उदाहरणका लागि एकले अर्कोलाई उसलाई कहिले रमाइलो र आनन्द लागिररहेको छ कहिले अप्ठ्यारो लागिरहेको छ ।
कतिबेला सेक्सको रफ्तार बढाउने इच्छा लागिरहेको छ यस्तै – यस्तै । यसले दुवैलाई असिम आनन्द प्राप्त हुन्छ
बिहिबार, २१ साउन, २०७८, बिहानको ०६:०८ बजे
राजनीतिक तनाब बढेका बेला किन सम्झिए ओलीले करिष्मालाई ?
काठमाडौं, असोज २ / राजनीतिक तनाब बढेका बेला पूर्व प्रम ओलीले करिष्मालाई सम्झिएका छन् । अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरलाई पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टेलिफोन गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले बुधबारबाट सुरु भएको कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी करिश्मालाई परीक्षाको विषयमा बुझ्न टेलिफोन
मुख गन्हाउनुको प्रमुख कारण जिब्रो सफा नहुनु
२ आश्विन / अनुहारमा भएका हरेक अंग जस्तै मुख महत्वपूर्ण छ । खान, बोल्न, हास्न लगायका काममा मुखको महत्व रहने गर्दछ । त्यसैले मुखको सरसफाइमा कुनै लापरबाही गर्नुहुँदैन । मुखको सफाइ नगरे गन्ध आउने मात्रै होइन, दाँत र गिजामा विभिन्न